बाढीले प्रभावित निजगढको जनजीवन सामान्य बन्दै
बाराः अविरल वर्षपछि बाढी पसेर प्रभावित बनेको निजगढको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । वषा रोकिएर बाढी र डुवान घटेपछि जनजीवन समान्य बन्दै गएको हो ।
दुई दिनदेखिको लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पसेर इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढको मेससहित पूर्वपश्चिम लोकमार्गको शहीद चोक क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानका घर, पसल र कार्यालय डुवानमा परेका थिए ।
बाढीले निकास नपाउँदा घर तथा पसल र कार्यालय डुवानमा परेका हुन् । बाढीले निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ का दर्जनौं घर डुवानमा परेका थिए । बाढीका कारण शहीद चोकबाट राजमार्गको पूर्वतर्फको लच्कासम्मको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको थियो ।
बाढी पसेर इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढको मेसमा रहेको भाँडाकुँडा बगाएको प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीले जानकारी दिए ।
बाढीपहिरो र डुबानबाट २० लाख जनता प्रभावित हुने, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं : यो वर्ष अर्थात २०७९ साल, मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट देशभर २० लाख जना प्रभावित हुने भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, डुबानलगायतका कारण २० लाख जना प्रभावित हुने जनाएको हो ।
‘प्रारम्भिक रूपमा यसवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट १७ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने ‘मनसुन नजिकिँदै जाँदा जिल्लागत र प्रदेशगत रूपमा गरिएको अध्ययन अनुसार लगभग २० लाख जनसंख्या र चार लाख २१ हजार घरधुरी प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।’
२०२० सम्म गृह मन्त्रालयको डिआरआर पोर्टल, विपद् पोर्टल, जलोत्पन्न प्रकोप विभाग र विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयको सहयोगमा २०७९ सालको मनसुनमा प्रभावित हुनसक्ने जनसंख्याको आँकलन गरिएको उनले बताए ।
विपद्का घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. १ मा पाँच लाख ७० हजार दुई सय ८४ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा लगभग ५४ हजार नौ सय ५५ जना प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसवर्ष मधेश प्रदेशमा चार लाख ६५ हजार चार सय ९५, बागमती प्रदेशमा एक लाख ४६ हजार आठ सय २८, गण्डकी प्रदेशमा एक लाख १९ हजार एक सय ९८, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाख ७९ हजार नौ सय दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ६३ हजार तीन सय १३ जना प्रभावित हुने अनुमान प्राधिकरणको छ ।
२०७९ सालको मनसुन जेठ १८ गतेबाट सुरू भई असोज १४ गतेसम्म रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेको छ । यस चार महिनाको मनसुनको अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने हुने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश नं. १ का तराईका भूभागहरू, बागमती प्रदेशका उत्तर पूर्वी भूभाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका उत्तर पश्चिमी भूभाग तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तरी भूभागहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरी यो वर्षको मनसुनको समयमा देशका अधिकांश भूभागमा अधिकतम तापक्रम औसत र औसतभन्दा कम हुने र अधिकांश भागमा न्यूनतम तापक्रम औसत तथा औसतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
रोपाइँको मौलिकता हराउँदै, असारे भाका पनि छोड्यो सुनिन
काठमाडौं : मानो खाएर मुरी उब्जाउने महिनाको रुपमा लिइने असारको शुरुवातमा नै किसानहरु रोपाइँमा व्यस्त छन् । दर्के झरी र चर्को घामको पर्वाह नगरी किसानहरु रोपाइँ गरिरहेका छन् । झन आज त असार १५, सरकारले नै असार १५ गतेलाई धान दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि त यो दिन खेतमा गई फोटो खिचाई सामाजिक संजालहरुमा फोटो हाल्नेको कुनै कमी हुदैन ।
हुन त सरकारले असार १५ लाई धान दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गर्नु अघि नै यो दिन दही चिउरा खाने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यही भएर पनि असारको यो दिनलाई विशेष मानिदै आएको छ ।
बढ्दो शहरीकरणले काठमाडौंलगायतका मुख्य शहरहरुमा रोपाइँ निक्कै कम हुने गरेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा पनि रोपाइँको मौलिकता हराउँदै गएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएपछि रैथाने प्रविधि लोप हुँदै गएका छन् । हलो/जुवा र गोरुको ठाउँ मिनिट्रिलर हलोले लिएको छ भने असारे गीत पनि सुनिन छाडेको छ ।
कृषि प्रधान देश नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली चामल हो । विश्वमा झन्डै चार अर्ब जनताको प्रमुख खाद्यान्न बाली चामल हो । धान उत्पादन गर्नेमध्येमा नेपाल १७औँ स्थानमा पर्छ । विश्वका ६४ देशमा धान रोपाइँ हुन्छ । सरकारी आँकडा अनुसार झन्डै ३१ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेकामा ४७ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन्छ । त्यसमध्ये तराई क्षेत्रले हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान ओगटेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विभागका अनुसार नेपालमा करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुँदै आएको छ ।
रोपाइँ गर्न प्रर्याप्त पानीको आवश्यकता पर्छ तर अभैmसम्म ६३ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । सिक्टा, महाकाली, बबई, रानी जमरा कुलरिया, र भेरी बबईलगायत राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा अधिकांश स्थानमा धानखेती आकाशे पानीमा निर्भर छ । वर्षा नभएको वर्ष नेपालमा धानको उत्पादन घट्ने र वर्षा राम्रो भएको वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने गरेको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार कृषि क्षेत्रको कूल गाहर््स्थ्य उत्पादन २७ प्रतिशत रहेकामा धानको योगदान ११ प्रतिशत छ । धानको उत्पादन घटेको वर्ष कूल गाहर््स्थ्य उत्पादनमा गिरावट आउने र धानको उत्पादन बढेको वर्ष गाहर््स्थ्य उत्पादनमा सकरात्मक संकेत देखिने गरेको छ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक रेवतीरमण पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको ठूलो महत्व रहेको जानकारी दिए । ‘भात खाने आदतमा परिवर्तन नगर्ने हो भने चामलको आयात रोक्न धानको उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन’ उनले भने ।
विभागका अनुसार संसारमा झन्डै १७ करोड हेक्टर जमिनमा धान खेती हुन्छ । खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)का अनुसार सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश चीन हो । चीन पछि भारत, इन्डोनोेशिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड बंगलादेश, म्यान्मार, फिलिपिन्स, ब्राजिल, जापान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, संयुक्तराज्य अमेरिका, दक्षिण कोरीया, इजिप्टपछि नेपाल रहेको छ ।
नेपालमा चैते, बर्षे र घैयाँ, भदैया र हिउँदेधान खेती गरिन्छ । संसारको सबैभन्दा उच्चस्थानमा धानखेती हुने देश नेपाल हो जुम्लाको छुमचौर र सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने झापा जिल्ला हो । झापालाई सरकारले धान उत्पादनको सुपर जोन घोषण गरी लागू गरेको छ । हिमालपारीका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ बाहेक नेपालका सबै जिल्लामा धान रोपाइँ हुन्छ ।
विगत १५ वर्ष देखिको तथ्यांकलाई विशलेषण गर्दा धानको उत्पादन सन्तोषजनक छैन । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र धानको उत्पादन दोव्बरले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको हालको जनसंख्या (झन्डै तीन करोड) जनतालाई पु¥याउन ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ तर नेपालको उत्पादन भने जम्मा ५३/५४ लाख मेट्रिक टनमा सीमित छ । धानको वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा हो । धान गै्रमिनी (घाँस) प्रजाति अन्तर्गतको बाली हो ।
हाल नेपालले प्रतिवर्ष ३० रुपैयाँ अर्बको चामल आयात गर्दै आएको छ । नेपालीको क्रयशक्तिमा भएको बढोत्तरीका कारण पिठोको सट्टा चामल खाने आदत बढ्दै गएको छ । फलस्वरुप मसिना तथा बास्नादार (बास्मती) चामलको आयातमा वृद्धि हुँदै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विश्व खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धान महत्वपूर्ण अन्न बाली हो । धानको नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकरुपमा समेत महत्व छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले ८२ जातका धानको विकास गरेको छ । जसमा ४२ जात हाइब्रिडका छन् ।
नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दलमलव दुई छ प्रतिशतका दरले धानखेती वृद्धि भए पनि उत्पादन भने आठ दशमलव शून्य चार प्रतिशतले घटेको छ । क्षेत्रफल बढे पनि उत्पादन घट्नुमा किसानलाई समयमा रासायनिक मल तथा बीऊ तथा सिँचाइ सुविधा सहज नहुनु, युवा जनशक्ति खेती गर्नबाट पलायन हुनु, आदि कारणले धानको उत्पादनमा गिरावट आएको हो । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हाल ६२ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् ।
आज भन्दा ठीक ५४ वर्ष पहिले अर्थात २०२५ सालमा झन्डै ९३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा संलग्न थिए । ५४ वर्षपछि कृषि पेशामा लाग्ने जनसंख्या ३१ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले धान उत्पादन वृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धानबालीका लागि पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपर जोन जस्ता विशिष्टकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्ता उत्पादन क्षेत्रमा धानबालीको व्यवसायीकरण यान्त्रिीकीकरण तथा औद्योगिकीरणलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको २०६१ मंसिर २९ को मन्त्रीस्तरीय घोषणाले प्रत्येक वर्षको असार १५ लाई धान दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि जनस्तरमासमेत स्थानीय कृषि सहकारी संस्था तथा अन्य समूहले पनि औपचारिक रुपले धान दिवस मनाउँदै आएका छन् । यसवर्ष धान दिवसको नारा ‘धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग’ रहेको छ ।
हेर्नुहोस् आठ फोटोमा रोहिंग्या शरणार्थीको काठमाडौंंमा धर्ना
काठमाडौं : युएनएचसीआरको कार्यालय अगाडि रोहिंग्या शरणार्थीले आफ्नो अधिकार सुरक्षित र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै उनीहरुले सोमबारदेखि धर्ना दिन सुरु गरेका हुन् ।
युएनएचसीआरको गेटमा अहिले धर्ना दिइरहेका शरणार्थीले आफ्ना बालबालिकालाई दिइँदै आएको शैक्षिक सुविधा, मासिक सहयोग, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगारी लगायतका मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
धर्ना कार्यक्रममा बङ्गलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान, सोमालिया, अफगानिस्तान लगायत अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिकहरू सहभागी रहेका छन् ।
हेर्नुहोस् आठ फोटो
तीन दिन मनसुन सक्रिय, सचेत रहन सर्वसाधारणलाई अनुरोध
काठमाडौं : आगामी तीन दिन मनसुन थप सक्रिय हुने भएको छ । मंगलबारदेखि बिहिबार सम्म मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक आइपुग्ने सम्भावना रहेकोले मनसुन थप सक्रिय हुन लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
आगामी तीन दिन देशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्र्यान बहावको जोखिम रहनुका साथै ठूला तथा साना नदीनाला र खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने छ । त्यसैले यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्वतयारी अपनाउन सर्वसाधारण तथा सबै सरोकारवाला निकायमा विभागले अनुरोध गरेको छ ।
मंगलबार रातिदेखि बुधबार प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । सदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानमा पनि भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ । साथै कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/झरी भई एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
बुधबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थानमा भारी वर्षा र कर्णाली प्रदेशको एक–दुई स्थानमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
बिहीबार गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा÷झरी र केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । बाँकी प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
बोक्सी भन्दै महिलालाई मलमुत्र खुवाउने दुई जना पक्राउ
सिरहा : सिरहामा बोक्सी भन्दै एक महिलालाई मलमुत्र खुवाएको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ६० वर्षीया एक महिलालाई उनकै छिमेकी दुई महिलाले बोक्सी भन्दै मलमुत्र खुवाएका थिए ।
मलमुत्र खुवाउने भगवानपुर गाँउपालिका ४ ठाडीटोलकी ३० वर्षीया फुलोदेवी साह र ५५ वर्षीया कोशिला देवी साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका दुबैजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा राखेर बोक्सी आरोप कसूरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
आईजीपी मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा, अबको सुनुवाइ असार १९ मा
काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्धको रिट फेरि पनि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको छ । आज प्रतिवादीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीसहितका सरकारी वकिलहरूले बहस गरिसकेपछि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता खम्म खाती सहित चारजना सरकारी वकिलले बहस गरेका छन ।
उनीहरुले प्रहरी प्रमुखमा धीरजप्रताप सिंह नै उपयुक्त पात्र भएको जिकिर गरेका छन् । आईजीपी बनाउने कुरा सरकारको विशेषाधिकार भएको दाबी बहसमा महान्यायाधिवक्ता खातीले गरे । रिटमाथिको अर्को सुनुवाई असार १९ मा हुनेछ । सो दिन प्रहरी महानिरीक्षक सिंहका निजी वकिलले बहस गर्नेछन् ।
मुद्दामा रिट निवेदक पोखरेलका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा यो रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।
सरकारले १८ वैशाखमा सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा जेठ १७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । त्यसयता सुनुवाइ निरन्तर छ ।
नवलपरासीः नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोटमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुनेलाई रु पाँच हजार सुत्केरी भत्ता दिइने भएको छ ।
गैँडाकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन महिनादेखि नै लागू हुनेगरी भत्ताको व्यवस्था गर्न लागेको हो । नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने नगरवासी महिलाका लागि भत्ताको व्यवस्था गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
बिहीबार नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार गरी भत्ता उपलब्ध गराइने गैँडाकोट नगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख झलकराज पौडेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै नगरपालिकाले आमा घर कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । विशेषगरी गैँडाकोट ३ र १८ का गर्भवतीको सुविधाको लागि सुत्केरी हुने मितिभन्दा एकहप्ता पहिलेदेखि नै आमालाई त्यस्तो घरमा बस्ने व्यवस्था गरिने, सुत्केरी भएपछि पनि बस्न दिइने र पोषिलो खाना उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
उपप्रमुख कोइरालाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सुत्केरी आमाः पोषिलो खाना’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनाका साथै गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउन प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भवती र उत्तरप्रसूति सेवा प्रदान गरिने बताइएको छ ।
गर्भवतीको सुविधाको लागि नगरपालिकाको वडा नं ३ र १८ स्थित नगर अस्पतालमा आमा घर सञ्चालन गरी सेवा दिइने उल्लेख गरिएको छ । सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली, हरेक घरमा खानेपानीका धारा, जनस्वास्थ्यमा लगानी भन्ने नीति लिइएको छ ।
उनले नेपाल सरकारको सबै जनतालाई निःशुल्क खोप लगाउने कार्यक्रम रहेकोले सबै प्रकारका खोप कार्यक्रमलाई नगरले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै पूर्ण खोप सुनिश्चित नगरपालिका घोषणा गरिने बताए।
कोभिड–१९ लगायत महामारी तथा अन्य सङ्क्रामक रोग न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको व्यवस्था गर्दै नगरपालिकाभित्र जीवन बचाउने औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा सुरक्षा सामग्रीको सहज आपूर्ति वा भण्डारणको व्यवस्था गरी जनतालाई सुरक्षित राखिने पनि उपप्रमुख कोइरालाले उल्लेख गरे ।
नगर अस्पतालाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी गैँडाकोट स्वास्थ्यचौकीलाई नगर अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने र वडा नं १६ मा रहेको अमरापुरी स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति पहल गरिने उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गैँडाकोट स्वास्थ्यचौकीबाट बीमा सिफारिस कार्यक्रम अगाडि बढाउन पहल गरिने र नगर अस्पतालबाट प्रदान भइरहेको बाहिरङ्ग सेवा निःशुल्क गरी नगर अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा स्थापना गरिने, गर्भ परीक्षणमा लाग्ने शुल्क निःशुल्क गर्दै पायक पर्ने स्थानमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिने र नेपाल सरकारबाट तोकिएका सम्पूर्ण औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासस
बाँकेः बाँकेको राप्ती नदीमा दाहसंस्कारका लागि गएका दुई युवाको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको छ ।
हुम्ला सिमिकोट–८ घर भई हाल नेपालगञ्ज–१ धम्बोझीमा भाडामा बस्दै आएका १८ वर्षीय त्रिबल शाही र लेकराज छन्तेल आज बिहान राप्ती नदीमा मृतावस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बुधबार घरबेटीको दाहसंस्कारमा गएका उनीहरू घर नफर्केपछि साँझ ६ बजे खोजतलास गर्दा नदीको छेउमा दुई जोर कपडा र एक थान मोबाइल फेला परेको थियो । पौडी खेल्ने क्रममा नदीमा बेपत्ता भएको आशङ्का गरिएको छ ।
बिहीबार बिहानै खोजतलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले डुडुवा गाउँपालिका–४ स्थित सिधनियाघाट राप्ती नदीमा उनीहरूको शव फेला पारेको हो । हुम्लाबाट अध्ययनका लागि नेपालगञ्ज आएका उनीहरूले यसै वर्ष यहाँस्थित धम्बोझी माविबाट कक्षा १२ को परीक्षा दिएका थिए ।